WARAYSIGA XIDDIGAHA (ABUUKAR SHIINO) - Kubadda Somali Sport Portal
Kubadda Webmaster / Monday, June 2, 2008
1) Ciyaar ku tirsanayd isreebreebkii ciyaaraha All African Games oo lagu qabtay Muqdisho kaasi oo ay foodda is dareen xulalkii qaranka kubadda Koleyga ee Soomaaliya iyo xulka Masar, oo ka mid ah dalalka Afrika ee lagu tiriyo inay ugu awoodda badan yihiin ciyaarta K/Kolyga, ayaa waqtigii nasashada (Half time) oo fikradaha la isku darayay ayuu Abuukar Fikir wacan soo jeediyay oo wuxuu yiri: Waxaa loo baahan yahay in la jabiyo qaab difaaceedka” Zone” ay ku ciyaarayaan kooxda Masar oo bannaanka loo soo saaro, sidaasi darteedna waxaa ila habboon in dhiirrigalin iyo kalsooni badan la siiyo ciyaartooydeena tuurashada ku fiican (shooters) ahaa oo kooxdii Soomaaliyeed ay wateen loona fasaxo inay tuuraan kubadaha sida: Dhamme iyo Shiikha.
Arrintan iyada ah waxaa ay dhalisay in goolal badan aan dhalino oo darbigii adkaa ee Masar ay dhisteen la jabiyo. Waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaartu ay ka bixi wayday in marba koox ay hoggaanka qabato oo aakhiritaankiina ay guushii ku dambayso kooxdii Soomaaliyeed, Iyadoo aan filayo guushaasi inay ahayd markii ugu horraysay taariikhda oo xulkeenna Qaranka kubadda koleyga uu ka adkaado xulka Qaranka Masar.
Ciyaarta kubadda koleyga iyadu qaabkee ku billowday?
Naadigaagii caan baxay ee Muqdisho, goorma ayaad ku biirtay?
kooxihii kubadda koleyga ee waqtigaasi jiray, wax ma inooga sheegi kartaa?
Muddadii aad u safnayd naadiga Muqdisho wax koobab ah oo ay ku guulaysteen ma jireen,ha noqdeen koobkii Jeneraal Daa'uud iyo kii horyaalka?
Goorma ayaad ku biirtay ciyaaryahannada heerka qaran ee kubadda koleyga?
1979-kii waxaan ku guulaysanay kaalinta 1aad ciyaarihii Jaamacadda carabta (Arab league) oo lagu qabtay Muqdisho (Somalia).
Kooxihii aad la ciyaartay ciyaaraha caalamiga ahaa , wax ma xusi kartaa ?
Ciyaaryahannadee ugu jeclayd inay garbahaaga buuxiyaan markaad u ciyaaraysay kooxdaada Muqdisho iyo xulka qaranka intaba?
Abuukar ma jireen noocyo ciyaareed oo k/koleyga aan ahayn oo aad safatay ?
Abuukar Shiino: Maya, ma jirin, laakiin sidaan horay u carabaabay, yaraantaydii waxaan ciyaari jiray k/cagta oo aan aad u jeclaa, ilaa haatanna waan ciyaaraa in kastoo aan darajo fiican ka gaarin.
Abuukar Shiino: 1984 kii ayaan u wareegay dhanka tababaranimada aniga oo markaasi waliba ahaa ciyaartooy naadiga ka tirsan,waxaana gacanta ku hayay kooxdii gabdhaha kubadda koleyga ee naadiga Muqdisho oo iyugu ku guulaystay Kaalinta 2aad horyaalka.
Sidoo kale 3 sano ayaan tababare u ahaa gabdhihii ku cayaarayay magaca gobolka Banaadir, labada sannadoodood waxaa ay ku guulaysteen koobkii kaalinta koowaad, sanadna waxaa ay galeen kaalinta 2aad.
Marka aad soo koobto, sidee buu ahaa maamulkii Isboortiga dalka Soomaaliya guud ahaanba ?
Sida dad badani ay qabaan, Qaladaad isboorti oo faro badan ayaa jiray, marka waxyaabihii aad qaladaadka u arkaysay maxaa ka mid ahaa ?
Abuukar shiino: Waa xaqiiqo inay jireen qaladaad faro badan, kuwii ugu darnaa oo aniga ahaan ii muuqday waxaa ka mid ahaa;
Diyaariye: Shiikha (Somali Youth Development)
Next Article Taariikhda Isboortiga